ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဒုတိယအကြော့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲကို စပိနျမှာ မကစားပဲ ပျေါတူဂီမှာ ကစားရနျ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ နာပိုလီအသငျးဥက်ကဌ – Myan Ball
နာပိုလီအသငျးဥက်ကဌ ဒီလျောရနျတဈဈဟာ ကာတလနျမွို့က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ဖွဈပှားနှုနျးမွငျ့တကျလာတာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျကို ပျေါတူဂီမှာ ကစားရနျ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလက နပေယျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ရှုံးထှကျ (၁၆) သငျးအဆငျ့ ပထမအကြော့တုနျးက နှဈသငျး (၁-၁) သရကေခြဲ့ပွီး ဒုတိယအကြော့ကို သွဂုတျလ (၈) ရကျနေ့ နူးကမျ့မှာ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သို့သျောလညျး စပိနျမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမှာ ကာတလနျ ဒသေမှာ အမွငျ့မားဆုံးဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး နစေ့ဉျ ရောဂါရှိသူ (၉၄၄) ယောကျ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက သတငျးမြားအရ သိရပါတယျ။ဗွိတိနျအစိုးရဆိုရငျ စပိနျကနေ ယူကေ ကို ရောကျလာတဲ့ ခရီးသှားတှကေို ကှာရာတငျး (၁၄) ရကျ ဝငျရောကျစခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နာပိုလီအသငျးဟာ ဘာစီလိုနာ အသငျးနဲ့ ကစားရမယျ့ပှဲအတှကျ ဒီလျောရနျတဈဈက စိုးရိမျနပွေီး ပျေါတူဂီကို ပွောငျးရှကေ့စားသငျ့တယျလို့ အကွံပေးသှားခဲ့တာပါ။
“စပိနျက အကွောငျးတှေ အမြားကွီး ကွားပါတယျ။ သူတို့ က ဘာမှ မဖွဈသလို လုပျနတော မှားပါတယျ။ ဘာစီလိုနာ ကို မသှားပဲ ပျေါတူဂီကို သှားသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ဂြာမနီ နဲ့ ဂနြီဗာ ဆိုရငျရော? သူတို့ သာ ခနျြပီယံလိဂျ ကို ပျေါတူဂီ ၊ ယူရိုပါလိဂျကို ဂြာမနီမှာ ကစားဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ပျေါတူဂီ ဒါမှမဟုတျ ဂြာမနီမှာပဲ (၁၆) သငျးအဆငျ့ ကစားသငျ့ပါတယျ” လို့ နာပိုလီအသငျးဥက်ကဌ က The Sun ကို ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နာပိုလီအသငျးဟာ ပထမအကြော့တုနျးက ဒရိုငျးဈမာတငျဈ ရဲ့ ဂိုး နဲ့ ဦးဆောငျခဲ့ပမေယျ့ ဘာစီလိုနာအသငျးဘကျက ဂရဈဇျမနျးက ခွပေဂိုး သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယအကြော့မှာ အနိုငျရမယျ့ အသငျးဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈ ဒါမှမဟုတျ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဒုတိယအကျော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကို စပိန်မှာ မကစားပဲ ပေါ်တူဂီမှာ ကစားရန် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ နာပိုလီအသင်းဥက္ကဌ
နာပိုလီအသင်းဥက္ကဌ ဒီလော်ရန်တစ်စ်ဟာ ကာတလန်မြို့က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်ကို ပေါ်တူဂီမှာ ကစားရန် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလက နေပယ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ရှုံးထွက် (၁၆) သင်းအဆင့် ပထမအကျော့တုန်းက နှစ်သင်း (၁-၁) သရေကျခဲ့ပြီး ဒုတိယအကျော့ကို သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့ နူးကမ့်မှာ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း စပိန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ ကာတလန် ဒေသမှာ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် ရောဂါရှိသူ (၉၄၄) ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သတင်းများအရ သိရပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရဆိုရင် စပိန်ကနေ ယူကေ ကို ရောက်လာတဲ့ ခရီးသွားတွေကို ကွာရာတင်း (၁၄) ရက် ၀င်ရောက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာပိုလီအသင်းဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ ကစားရမယ့်ပွဲအတွက် ဒီလော်ရန်တစ်စ်က စိုးရိမ်နေပြီး ပေါ်တူဂီကို ပြောင်းရွှေ့ကစားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးသွားခဲ့တာပါ။
“စပိန်က အကြောင်းတွေ အများကြီး ကြားပါတယ်။ သူတို့ က ဘာမှ မဖြစ်သလို လုပ်နေတာ မှားပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ ကို မသွားပဲ ပေါ်တူဂီကို သွားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဂျာမနီ နဲ့ ဂျနီဗာ ဆိုရင်ရော? သူတို့ သာ ချန်ပီယံလိဂ် ကို ပေါ်တူဂီ ၊ ယူရိုပါလိဂ်ကို ဂျာမနီမှာ ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပေါ်တူဂီ ဒါမှမဟုတ် ဂျာမနီမှာပဲ (၁၆) သင်းအဆင့် ကစားသင့်ပါတယ်” လို့ နာပိုလီအသင်းဥက္ကဌ က The Sun ကို ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နာပိုလီအသင်းဟာ ပထမအကျော့တုန်းက ဒရိုင်းစ်မာတင်စ် ရဲ့ ဂိုး နဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်က ဂရစ်ဇ်မန်းက ခြေပဂိုး သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့မှာ အနိုင်ရမယ့် အသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဒါမှမဟုတ် ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုနာကို က ဗာရာနီ လကျသဈ ကို ချေါယူရနျ ပွငျဆငျနတေဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျး